» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १३
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १३
८ बैशाख २०७७, सोमबार ०८:२१
मकवानपुर, ८ बैशाख । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । यस भिडियो सिरिजमा हामी नेपाल स्टारको अडिसन राउण्डबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यसअघि नै हामीले पोखारा, बुटवल र चितवन अडिसनबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ । तपाईले ती भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोका अन्तिममा अथवा डिस्क्रीप्सनबाट हेर्नसक्नुहुनेछ । यस भिडियो सिरिजको तेह्रौँ भागमा धनगढी अडिसनबाट छानिएका ३ जना प्रतियोगीहरु साजन लामा, शिवराज परियार र समीर खरेलका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
१) साजन लामा– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएका पहिलो प्रतियोगी हुन् साजन लामा । यसअघि द भ्वाईस अफ नेपाल सिजन २ को ब्याटल राउण्डसम्म पुगेका उनी त्यसपश्चात बाहिरिएका थिए । २६ वर्षीय साजन सुदुर पश्चिमको धनगढीका हुन् । भजन गाउँदै साँगितिक यात्रा सुरु गरेका साजनले कतारमा सेक्युरिटी गार्डका रुपमा समेत काम गरेका थिए । आमा र बुवाबाट लोकदोहोरी गीत सुन्दै हुर्किएका साजनलाई संगीत क्षेत्रमा लाग्न त्यसैले प्रेरणा दियो । उनका बुवा अहिले पनि भजन गाउँछन् भने आमा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा हुर्किएका साजनले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा संगीत सिकेका छैनन् । गायक रामकृष्ण ढकाललाई आईडल मान्ने साजनले अडिसनमा ‘आउँदिन काँडा बनेर’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
२) शिवराज परियार– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएका दोस्रो प्रतियोगी हुन् शिवराज परियार । संगीत क्षेत्रमा सक्रिय रहेका शिवराजले अडिसनमा ‘सुन ओढेर चाँदीमा सुत्नेलाई’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
३) समिर खरेल– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएका तेस्रो प्रतियोगी हुन् समिर खरेल । झापाका समिर म्युजिक टिचर हुन् । विद्यालयमा संगीत सिकाउने समिर आफै पनि संगीत सिकिरहेका छन् । कान्तिपुर आईडलमा समेत चर्चा कमाउन सफल समिरका आफ्ना केही ओरिजिनल गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् । उनले अडिसनमा ‘गल्ती हजार हुन्छन्’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतमा निर्णायकको मन जितेका समिरले दोस्रो पटक ‘जन्मनु पर्छ’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतपछि दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।